Na-efegharị: Nchịkọta Oge Ntugharị Maka Ngwa Mobile | Martech Zone
Y’oburu na inwetara ngwa mkpanaka, Nchịkọta Flurry bụ ihe a na-enwerịrị. Ọ bụ Ngwa ngwa ngwa dị ka Google Analytics dị na weebụsaịtị.
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-ahụ maka ikpo okwu na-arụ ọrụ iji jikọta Flurry n'ime ngwọta ha n'ihi na ọ dịghị mkpa maka mgbakwunye mgbakwunye ka ị na-eji nyiwe ndị ọzọ. Emepụtara ngwa mkpanaka anyị Bluebridge, anyị mobile onye nkwado, na ha na-ike na Flurry. Ma ọ bụrụ na ị mepụtara nchịkọta ngwa, Flurry na-enye gị ohere ijikwa Pọtụfoliyo App gị niile.
Ihe - Sochie omume ndị ọrụ gị na-eme ma nweta nghọta site na otu ha si eji ngwa gị. Ghọta ma jiri anya nke uche usoro ojiji, otu ndị ọrụ si aga n'ihu na ngwa ahụ yana ihe omume ha na-eme yana nyocha ụzọ Onye ọrụ. Omume nke onye ọrụ site na ngwa ngwa, ojiji, wụnye ụbọchị, afọ, okike, asụsụ, ọdịdị ala na ọwa nnweta.
Ndi oru - Chọpụta otu ndị ọrụ gị si aga n’ihu site na ụzọ dị iche iche na ngwa gị. Hụ ebe ha na-enwe nsogbu ma chọpụta ebe ndị ọrụ ahụ na-emezughị usoro ahụ kwụsịrị. Mee ka nghọta a dịkwuo oke ọnụọgụ ndị mmadụ mezuru ụzọ ndị a.
Njide - Tụọ onye ọrụ jiri ngwa gị. Ghọta pasent nke ndị ọrụ na-alaghachi na ngwa gị iji chọpụta ịdị mkpa nke azụmahịa gị. Layer na Agba ka amaba miri na otu onye ọrụ dị iche iche ma ọ bụ nnweta ọwa.
agba - Tụlee otu otu ndị ọrụ ngwa dị iche iche si dị iche n ’ụzọ ha si eme ihe na omume ha. Nwube ma mekwaa ngalaba gafee ojiji, njigide, olulu, yana mkpesa inweta onye ọrụ iji ghọta ụdị ọrụ ndị kacha baa uru na azụmaahịa gị yana ihe ha na-eme na ngwa gị.
Mmasị - Mara ndị ọrụ gị. Leverage na-agbasa mmadụ iji ghọta mmasị na ebumnuche onye ọrụ. Ndị ọrụ na-egosipụta mmadụ na-egosipụta ụdị ojiji eji eme ihe n'oge na-adịbeghị anya n'ime nchịkọta ngwa ọdịnala. Ndi mmadu gunyere ndi njem, ndi nwe anu ulo na ndi ohuru, tinyere otutu ndi ozo.
Demographics - Kpesa na ndị ọrụ kwupụtara afọ na okike ma ọ bụrụ na ịnakọta ha n'aka ha. Ọ bụrụ na ọ bụghị, jiri mmụta mmụta nke Flurry na ngalaba nke nde ngwaọrụ 40 iji kwuo amụma ziri ezi na ị nwere afọ na okike.
Nchịkọta Nnweta Ndị Ọrụ - Nyochaa mbọ ndị ọrụ nnweta gị na tụọ mmetụta nke mkpọsa ma ọ bụ ọwa dị iche na njirimara onye ọrụ gị, yana azụmaahịa gị.
Flurry nwere SDKs, ngwa ngwa, yana akwụkwọ zuru ezu na Yahoo Onye Mmepụta Network. Ọ na-akwado ngwa iOS na gam akporo - gụnyere ngwa tvOS!
Na Flurry emelitere ngwa mkpanaka ha. Sochie arụmọrụ gị na ngwa oge obula, ebe ọ bụla yana Flurry ngwa maka gam akporo na iOS! Tọọ metrik kachasị amasị gị ma nata ọkwa gbasara ọnụọgụ kachasị gị mkpa. Ngosiputa ihe nlere achoro na akwado nkwado nke oge na ndi oru eji aru oru na ihe omimi.
Tags: Flurrynyocha banyere ekwentị mkpanaakamobile ngwa nyochamobile ngwa ihemobile ngwa funnelsmobile ngwa ọdịmmanjigide ngwa mkpanakamobile ngwa nkewamobile ngwa ọdịnalanjigide ekwentị